Bogga ugu weyn Ganacsiga Forex ee Nigeria | Tilmaame Talaabo-Talaabo Buuxa ah ee Bilowga ah
Ma jiro wax dood ah in suuqa Forex uu yahay suuqa maaliyadeed ee ugu weyn adduunka. Waqtigaan, xitaa waad baran kartaa sida lacag looga sameeyo forex adigoon ka ganacsan haddii aadan haysan raasumaal ama aadan rabin inaad halis geliso dhaqaalahaaga.
Nigeria gudaheeda, ganacsiga Forex ayaa si tartiib tartiib ah u noqday mid aad u weyn iyadoo dad badan ay u soo guurayaan suuqaan. Suuqani wuxuu u kiciyay koboc dhaqaale dhaqaalaha Nigeria oo waxaa laga yaabaa inaad damacdo inaad weydiiso "Trading Forex ee Nigeria ma sahalbaa"?
Hagaag, maqaalkani wuxuu ka jawaabi doonaa su'aasha isagoo siinaya burburin dhammaystiran ee Trading Forex ee Nigeria. Asal ahaan, waxaad baran doontaa suuqa, meheradaha ganacsiga, faa'iidooyinka, iyo faa'iido darrada, iwm.
Waa maxay ganacsiga Forex?
Ganacsiga Forex asal ahaan waa geedi socodka lagu beddelayo hal lacag oo mid kale loogu talagalay ujeeddada ganacsiga. Is -weydaarsigaani wuxuu u dhacaa si laba -labo ah maadaama loo adeegsan karo in si fudud loo fuliyo macaamilka caalamiga ah.
Iyada oo sarifka sarrifka oo aad u sarreeya uu socdo maalin kasta oo sicirrada sarrifku sii yaraanayaan, waxay furtay boos ay dadku lacag ku heli karaan iyaga oo sarrifyada lacagaha qaaliga ah ku beddelaya lacago qiimahoodu hooseeyo.
Laakiin dad badan oo ku jira suuqa forex ma sameeyaan kaligood ganacsi, waxay adeegsadaan derivatives ganacsi taas oo u oggolaanaysa inay ka faalloodaan dhaqdhaqaaqa qiimaha. Iyo saadaalin kasta oo sax ah, waxay helayaan iyo sida kale.
Forex Trading ma sharci baa Nigeria?
Dad badan oo ku nool Nigeria ayaan baaritaan ku sameyn suuqa forex si ay u sameeyaan fikrado badan. Wada sheekaysiga ku saabsan suuqan waa mid aan caadi ahayn, sidaa darteed, dad badan kuma qanacsana rajada suuqa.
Trading Forex waa sharci Nigeria. Dawladda Nayjeeriya waxay qiraysaa suuqa sarrifka saamiyada, sidaa darteed tani waxay ka dhigaysaa ka ganacsiga suuqa mid la aqbali karo oo sharci ah.
Akhri Sidoo kale: Faallooyinka Imarketslive: Ma sharci baa mise waa khiyaano kale oo Forex Trading
Intee in le'eg ayaan u baahanahay inaan ku bilaabo Ganacsiga Forex ee Nigeria?
Qaar badan oo ka mid ah Dillaaliyeyaasha Forex uma baahna inaad wax lacag ah dhigato si aad u bilowdo ganacsi. Taa bedelkeeda, qaar ka mid ah ayaa ku siinaya dhiirigelin $ 20 ah si aad uga ganacsato meheraddooda - $ 20 badiyaa waa ku -tababar oo looma isticmaali karo in lagu ganacsado.
Iyada oo ay ugu wacan tahay heerarka sarrifka sarrifka ee saamaynaya Nigeria, waxaad u baahan tahay qiyaastii $ 100 si aad u bilowdo ganacsi forex halis ah. Dillaaliintu waxay caadi ahaan kugula talinayaan inaad maalgashato qiyaastii $ 200 si aad u hesho bilow madax adag.
Waa maxay Waqtiga ugu Wanaagsan ee Ganacsiga Forex ee Nigeria?
Suuq kasta wuxuu leeyahay xilliyadiisa ugu sarreeya. Suuqa Forex ma aha mid ka reeban arrintan marka loo eego ganacsiga marka uu jiro mug aad u sarreeya isla markaana dareeraha ayaa weli ah waqtiga ugu wanaagsan ee la ganacsan karo.
Waqtiga Nigeria, tani inta badan waxay dhacdaa inta u dhaxaysa 2 -da duhurnimo iyo 10 -ka fiidnimo taas oo ah is -dhaafsiga u dhexeeya London iyo New York. Wakhtigan, dad badan ayaa soo jeeda oo suuqa ayaa dhaqdhaqaaq badan ka socda. Adiguna ahaan reer Nayjeeriya, waxaad ku ganacsan kartaa saacadahaas gudahood ka dib markaad ka soo noqoto shaqadaada maalinlaha ah.
Sideen Lacag ugu Helaa Forex gudaha Nigeria?
Lacag ka sameynta suuqa Forex runtii waa sababta ay dad badani ugu soo biiraan suuqa Forex. Si kastaba ha ahaatee, markaad gasho baabuurka saxda ah, si joogto ah ayaad u kordhin kartaa dakhligaaga.
Istaraatiijiyadda lacag -samaynta ugu caansan ee suuqa Forex ee Nigeria waxay noqon doontaa ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah oo kuu oggolaanaya inaad ka ganacsato dhammaan ama wax aan ahayn. Markaad isticmaasho ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah, badiyaa waxaad heshaa haa iyo maya dhacdada waxaadna u baahan tahay lammaanaha lacagta si aad uga sarreyso heer cayiman maalin gudaheed si aad u guuleysato.
Gaabisiddu sidoo kale waa istaraatijiyad kale oo wanaagsan oo ku lug leh inaad yareyso lacagaha qaaliga ah. Markaad si guul leh u guulaysato, muddada gaaban waxaad macaashtaa iyo sida kale
Sida Loo Bilaabo Ganacsiga Forex ee Nigeria
Bilaabidda suuqa Forex maadaama qofka reer Nigeria uusan u baahnayn rabitaan xooggan. Hagaag, aan kaaga digo in rabitaan xoog leh uusan kuu ballanqaadayn inaad lacag badan samayn doonto. Khasaarahaagu wuu kordhayaa marka aadan raacin nidaamka caadiga ah.
Waa caqli -darro inaad ku khamaarto lacagtaada suuqaan - waxaad lumin kartaa kumanaan doolar ilbidhiqsiyo gudahood. Bilow ahaan, waa inaadan waligaa suuqa ku ganacsan adigoon isticmaalin lumis joogsi; waxay noqon kartaa waxyeello maadaama wax badan ay dhici karaan saacad gudaheed.
In kasta oo aad isticmaali karto luminta joogsiga si aad uga caawiso dhimista khasaarahaaga, kaalmada ugu fiican ee aad heli karto waxay noqon doontaa inaad qaadato qaaciddada guusha. In kasta oo aad ka soo saari karto qaacidadan ganacsade hore loo aasaasay, waxaad kaloo wax ka baran kartaa khibradaada shaqsiyeed.
Guud ahaan, si aad uga bilowdo ganacsiga Forex ee Nigeria waxaad u baahan tahay:
Isku Xirka Internetka oo Adag - Xiriirinta internetka ayaa dammaanad ka qaadaysa inaad heli doonto sarrifka lacagaha qalaad adiga oo isha ku haya isbeddelka suuqa.
Nigeria gudaheeda, internetku wuxuu noqon karaa mid aan la isku hallayn karin oo niyad jab leh. Dhab ahaantii waxaa jira siyaabo gal internetka adiga oo aan lahayn fiilo taasina waa waxtar.
Device - Xirfadlayaal badan ayaa kugula talin lahaa inaad isticmaasho aaladaha halkii aad ka isticmaali lahayd aalad. Qalab ayaa diiradda saari kara hal calaamad oo keliya laakiin aalado kala duwan ayaa kaa caawinaya inaad mid walba fiiro gaar ah siiso.
Raasamaalka Ganacsiga - Kuma dhex geli kartid suuqa forex adigoon haysan lacag caddaan ah. Waa uun inaad gasho raashinka oo aad soo qaadato alaab aadan iibsan karin. Raasamaal ganacsi oo wanaagsan ayaa had iyo jeer go'aamiya sida habsami leh ee macaamilkaagu u socon doono.
Xisaab la leh Dillaal lagu Kalsoon yahay - Dillaal lagu kalsoon yahay waa inuu kaa caawiyaa sameynta akoon aad si fudud oo sharci ah ugu ganacsan karto. Marka, waxaad u baahan tahay inaad bixiso dillaal si uu kuu caawiyo.
Maxay yihiin Istaraatiijiyada Ganacsiga Forex ee Nigeria?
Markaad ku ganacsato suuqa Forex Nigeria, waxaad u baahan tahay inaad ogaato xeelado ganacsi oo dhowr ah si ay kuu caawiyaan. Waxaa ka mid ah:
Kani waa nooc ka mid ah ganacsiga isbeddelka muddada-dheer. Istaraatiijiyaddan, baayacmushtariyadu waxay raadinayaan isbeddello ballaadhan oo ah qiimaha lammaanaha lacagta ah. Aqoonta xooggan ee aasaaska suuqa iyo qaab dhismeedka lacagta shaqsiyeed ee aad ka ganacsato ayaa kaa caawin doonta qaabkan.
Boosaska dabagalka ayaa ah dhaqdhaqaaqyo gaagaaban oo gaagaaban oo faa'iido leh. Ganacsatadoodu waxay leeyihiin aqoon wax ku ool ah oo ku saabsan dhaqaalaha guud ee aasaasiga ah ee ka dambeeya lammaane lacag ah. Aqoontaas, waxay ku samayn karaan lacag aad u badan.
Tani waxay caan ku tahay ganacsato badan oo forex ah. Ganacsatada maalintii ma la tacaali karaan dhaqdhaqaaqyada habeenka ah ee marba marka ka dambeeya dhacaya. Suuqa forex -ka, wax badan ma saameyso saacadaha ganacsiga awgeed.
Waa kuwee Dillaaliyeyaasha Forex ee ugu Fiican ee Nigeria?
Tayada iyo bixinta dillaalka aad dooratay ayaa go'aamin doona farqiga u dhexeeya istaraatiijiyadaada ganacsi. Nigeria gudaheeda, waxaa jira tiro aad u wanaagsan oo ah wakaaladaha dillaaliyeyaasha Forex iyo bixinta ay bixiyaan. Waxaa ka mid ah:
qabasho Koontada Ugu Yar Lammaanaha La Bixiyay
FXTM $ 750 N / A
FOREX.com 100 ee Xulashada Lacagta Saldhigga ah 80 +
QAADASHADA € 100 50 +
ETORO $ 50 47
Ganacsiga Forex ee Nigeria | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Ganacsiga Forex ee Nigeria wuxuu leeyahay faa'iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkiisa. Aan si dhaqso leh u aqoonsanno.
Qiimaha macaamilka oo hooseeya Brokerage
Suuqa 24-Saac Qodobka Khatarta Sare
Baaskiil sare Trading Bulshada
Awoodda Faa'iido Weyn Joogitaanka Khayaanada
Markaad fiiriso suuqa Forex, waxaad arkaysaa fursad aad lacag badan ku samaysan karto ama bad weyn oo ku hafan doonta kheyraadkaaga. Intaad dooranayso dhinac, waa lama huraan inaad ogaato in dad badani ay lacag sameeyeen oo haddana lacag ka sameeyeen suuqan.
Markaad rabto inaad ka ganacsato forex -ka Nigeria, waxaad u baahan tahay inaad hesho dillaal aamin ah. Marka, waxaan kugula talinayaa inaad waqti badan geliso sidii aad u heli lahayd dillaalihii ku wareejin lahaa giraangirahaaga nasiib ee suuqaan.
Iyada oo leh dillaal weyn, istiraatiijiyad guuleysata, iyo raasumaalka saxda ah, waxaad si raaxo leh uga faa'iideysan kartaa suuqa forex.
Benzinga - Dillaaliyeyaasha Forex ee ugu fiican Nigeria 2022
Forex Trading NG - Ganacsiga Forex ee Nigeria ee bilowga ah: Tusaha ugu dambeeya
Dheelitirka - Faa'iidooyinka Ganacsiga Forex
20 Shaqooyin oo bixiya $ 35 Saacad 2022 | Lacag Caddaan ah
Hel Qorsheyaal Degdeg ah oo Taajir ah 2022 | Hubso Lacag mar walba
Dib -u -eegista Tron Coin 2022: Qiimaha, Platform -yada taageera | Sharci ama Fadeexad
Ma waxaad raadineysaa meesha ugu ammaansan oo aad ku iibsato BTC? Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad tixgeliso Qiimaynta Lacagta Tron sida…
Waa Maxay Ikhtiyaarada Ganacsi ee Ugu Fiican Kanada 2022?
Qofku waxa uu leeyahay doorashooyin badan oo uu ka xusho marka ay khusayso ikhtiyaarka ganacsi iyo dammaanadda…